कहाँ कति मतदाता ? – Everest Dainik – News from Nepal
कहाँ कति मतदाता ?
एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३५ मतदाताको अन्तिम नामावली तयार
काठमाडौं, कात्तिक २० । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले १० वटा क्षेत्र रहेको काठमाडौँभन्दा मोरङमा ४१ हजार ३११ मतदाता बढी छन् ।
सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा छन् । यसपटक निर्वाचन आयोगले मताधिकार प्राप्त एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३५ मतदाताको अन्तिम नामावली तयार पारिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार मोरङमा ६ लाख ४४ हजार ७८३ मतदाता छन् । मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँमा ६ लाख तीन हजार ४७२
मतदाता छन् ।
काठमाडौँमा दस निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको ललितपुरमा दुई लाख २८ हजार ३३९ मतादाता छन् । दुई लाख ३३ हजार ५०५ मतादाता रहेको धादिङमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
भक्तपुरमा एक लाख ७८ हजार ९९ मतदाता छन् ।
झापामा चार लाख पाँच हजार २३६ मतदाता छन् । सुनसरीमा चार लाख ७४ हजार ३०८ मतदाता छन् । झापामा पाँच र सुनसरीमा चार निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीन लाख ५४ हजार ४० मतदाता रहेको चितवनमा तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देहीमा पाँच लाख २२ हजार ६०२ मतदाता छन् ।
प्रदेश २ का सबै जिल्लामा चार÷चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ धनुषामा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । धनुषामा चार लाख चार हजार ६७४ मतदाता छन् । आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम मतदाता पर्सामा दुई लाख ८९ हजार ५४ छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी माग
गौरिकाले आफूलाई ‘नेपाली नै होइन’ भन्नेलाई दिइन् यस्तो स्पस्टीकरण
उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा सुत्केरी अस्पतालमै ‘बन्धक’
बालबालिकामाथि यौन शोषण गर्ने अमेरिकी नागरिक मुडी पक्राउ
५ हजार शिक्षकको स्थानीय तह परिवर्तन गरिदै
राजधानीमा पुसदेखि विद्युत् तार भूमिगत गरिँदै
अनुमति नलिई भारतीय दूतावास छिर्ने सशस्त्रका डिआइजी श्रेष्ठ कारबाहीमा